Madaxwaynaha Khaatumo Galaydh” Dastuurka Somaliland dib haloo furo” (dhegayso) – Radio Daljir
Madaxwaynaha Khaatumo Galaydh” Dastuurka Somaliland dib haloo furo” (dhegayso)
Diseenbar 7, 2017 8:06 b 1
Madaxwaynaha Khaatumo Cali Khaliif Galaydh oo ku sugan magaalada Hargaysa ee xarunta Somaliland ayaa u sheegay warbaahinta inay is-arkeen madaxwaynaha cusub ee Somaliland Muuse Biixi oo ku guulaystay doorashadii kadhacday Somaliland.
Cali Khaliif ayaa sheegay in loo baahanyahay in awood qaybsi uu ka hirgalo Somaliland, oo uu sheegay inay beel gaar ah u badantahay.
Waxaa uu sheegay qodobadii lagu heshiiyay shirkii Caynaba ee uu la saxiixday madaxwaynaha xilka ka degay ee Somaliland Axmed Siilaanyo inay qayb ka ahayd in laga heshiiyo awood qaybsiga iyo Somaliland in la wada leeyahay ah.
Dhinacyada baarlamaanka, ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ayuu sheegay in looga fadhiyo qaybtooda in laga siiyo maamulka Khaatumo.
Guddoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland ayaa dhowaan u sheegay warbaahinta heshiiskii Caynabo ee Khaatumo iyo Somaliland in la horkeeno baarlamaanka Somaliland.
Waxaa uu ku faanay tan iyo heshiiskii Caynabo inay nabad ka dhacday deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn.
Fanaanadda Guduudo Carwo oo ku geeriyootay magaalada Hargaysa
Abdulaahi Abdisamed Isse Catoosh 11 months
hhhhhhh,kan illahyba u maqan somaliland wax tarimayo cid kale wax uguma yaalo